shweDarling - All Things Myanmar Burmese
Archive for the 'shweDarling' Category
Page 13 of 57« First«...10111213141516...»Last »
Myanmar News: One dead in Myanmar blast (March 26, 2009)YANGON – ONE person was killed and two others injured in ashwedarling.com/blog
And sings ashwedarling.com/blog
Journaling in .txt with NotepadBlogger and Microsoft employee Derek Dysart has postedagreat tip forshwedarling.com/blog
iOS6 Apple Map အဆင်မပြေဘူး လား Google Maps for iOS ဒီည ထွက်လာတော့မယ်
Apple ရဲ့ နောက်ဆုံး ပေါ် devices တွေကနေ iOS6 နဲ့ ဖယ်ရှားခြင်းခံလိုက် ရတဲ့Google Map ဟာ Apple Users တွေရဲ့အဆင်မပြေမှုတွေ ကို ပြေလည်စေဖို့Google Map ကို iTune မှာ App အနေနဲ့Google ကဖန်တီးပြီး ဒီကနေ့ ညမှာ download လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်. Picture ref: gadgets.ndtv.com Lastest News! iTunes store ကနေ Google Maps App ကို အောက်ပါအတိုင်းမြင်ရပြီး download လုပ်နိုင်ပါပြီ
Posted in Knowledge Base, shweDarling | No Comments »ံအဆိုတော် Mr.Fokker မှ ပြန်လည်တောင်းပန်ခြင်း
“ကျွန်တော်မှားပါတယ်။ ကျွန်တော်ဘယ်ဂီတကိုမှ မရွဲ့ပါဘူး။ သီချင်းကို ရိုးရိုးသားသား လိပ်ပြာသန့်သန့်ပဲ ဖန်တီးထားတာပါ။ စင်ပေါ်မှာ ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းပြောမိတဲ့အတွက် ပရိသတ်ကိုလည်းတောင်းပန်သလို တစ်နိုင်ငံလုံးက လိုက်ဖ်ကြည့်ခဲ့တဲ့ ပရိသတ်ကို လည်း တောင်းပန်ပါ တယ်” အဆိုတော်ဖော်ကာ၏ ရှင်းတမ်း ရန်ကုန်၊ဒီဇင်ဘာ-၁၁ ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုတွင် Wanted အဖွဲ့မှ အဆိုတော်ဖော်ကာ (Fokker)မှ စင်မြင့်ထက်တွင် စီဒီနှင့်သီဆိုသူများအား ပုတ်ခတ်ပြောဆိုသွားသည့်အပေါ် ရက်ပ်ပါဂီတသမားများအကြား မကျေနပ် မှုများ အရှိန်ပြင်းထန်နေပြီး ယခုကဲ့သို့ ပြောကြားခဲ့ခြင်းအပေါ် သက်ဆိုင်သူများ အား တောင်းပန်ပါကြောင်း Fokker က ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ရက်တွင် 7Day News သို့ ပြောသည်။ အဆိုတော်ဖော်ကာသည် ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်က ပြုလုပ်သည့် အရှေ့တောင်အာရှ [...]
Posted in shweDarling |3Comments » နစ်နာမှု အတွက် မတောင်းပန်သင့်ဘူးလော?
ပတ်ဝန်းကျင်မှ တွေ့ရာ မိန်းကလေးများပုံကို ဓါတ်ပုံရိုက်ယူပြီး မကောင်းတာလုပ်စားတဲ့ (ဖာ) အသွင် ဖော်ပြချက်ကြောင့် The Voice Weekly တောင်းပန်ရ The Voice Weekly ဂျာနယ် သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ထုတ် Vol 8,No 48 စာမျက်နှာ ၁၈ တွင် ဘဝနွံထဲက အကြွေပန်းလေးများ ဟုဆိုသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လမ်းမကြီးဘေးတွင် မကောင်းတာလုပ်စားသော(ဖာ) ပြည့်တန်ဆာ အမျိုးသမီးများဘဝ အား ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ဖော်ပြခဲ့ရာ တွင် ထိုဆောင်းပါးတွင် ပါရှိသော ဓါတ်ပုံမှာ လမ်းဘေးတနေရာတွင် အမျိုးသမီးငယ်တစ်စု စုစည်းနေပုံကို ပိုင်ရှင်မသိပဲ ခိုးယူရိုက်ယူခဲ့ပြီး ဆောင်းပါးနဲ့ တွဲစပ်၍ ပြည့်တန်ဆာ(ဖာ)များအသွင် သရုပ်ဖော်ခဲ့ပါသည် ။ထို့နောက် ယခုအခါ ထိုဓါတ်ပုံကြောင့် ပြဿနာများ ဖြစ်ပွါးလာပြီဖြစ်သောကြောင့် [...]
Posted in shweDarling |2Comments » Page 13 of 57« First«...10111213141516...»Last »
You are currently browsing the archives for the shweDarling category.